Spiritum समीक्षा | अनलाइन मानसिक पठन
अनलाइन मानसिक रीडिंग > आध्यात्मिक समीक्षा
जब आत्माले तपाईंको सहि मार्गको पालना गर्न निर्देशन पुर्याउन उत्प्रेरित गर्दछ, त्यसमा निर्मल प्रतिभाशाली मनोविज्ञानहरू आत्मा तपाईं गाइड गर्न तयार हुनुहुन्छ। यो विश्वव्यापी मनोवैज्ञानिक सञ्जालले अन्तर्राष्ट्रिय आदर सम्मानित मनोविज्ञानमा तपाईंको सम्पर्क (तपाईंको देशी भाषामा) जडान गर्न मद्दतको रूपमा दृढतापूर्वक आफ्नो स्थान लिईएको छ।
तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ आत्माको नियत पूर्व-निर्धारित छ। यसको मूल कम्पनी, Eso.tv, साइकिक टिभी कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्दछ जुन १ countries देशहरूमा प्रसारण गरिन्छ र सयौं हजारौं दर्शकहरूलाई उत्सुकतासाथ हेरिन्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईं तपाईंको पढाइबाट प्रामाणिकता, सटीकता र अंतर्दृष्टिको उच्चतम मापदण्डहरू अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रमाण चाहिन्छ? तिनीहरूको मनोविज्ञानको दायरामा हेर्नुहोस्। आत्मा ह्यान्डप्लिक्स र ध्यानपूर्वक प्रत्येक स्थानीय देशबाट सर्वोत्तम मनोवैज्ञानिक सावधानीपूर्वक प्रत्येक साधकको लागि विशेष रूपमा व्यक्तिगत रूपमा शीर्ष-गुणस्तरको निर्देशन र सल्लाह उपलब्ध गराउन।
प्रत्येक मानसिकताले कठोरताले पुरातन अभ्यासहरू जस्तै टैरोट कार्ड रीडिंग्स, अंकोलोजी र ज्योतिष र / वा सहज प्रतिभा र क्षमता संग भरिन्छ। र प्रत्येकलाई उनीहरूले आफ्नो जीवनको मार्गमा चाहनेहरूलाई डोऱ्याउन जिम्मेवार ढंगले उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी वरदान प्रयोग गर्दै सुनिश्चित गर्न मद्दतको लागि निरन्तर निगरानी गरिन्छ। एकसाथ, तिनीहरू आध्यात्मिक निर्देशन, ऊर्जा रीडिंग, सपना विश्लेषण, रन पढ्ने, च्यानलिंग, र अन्य धेरै सहित क्षमताहरूको एक विस्तृत दायरा प्रतिनिधित्व गर्दछ।
र जोड्न सजिलो छ! साइटलाई इन्सिस गरिएको छ तर तपाईं तुरुन्तै र सजिलो बटुवाहरूसँग डराउनु भएको छ जुन तपाइँले एक मानसिक, कुराकानी नि: शुल्क च्याट च्याट गर्न सक्नुहुन्छ वा निजी पढ्नको लागी क्रेडिटहरू किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले कुराकानी नि: शुल्क विकल्प छान्नुभयो भने, तपाइँ भिडियो बाकसमा छिट्टै क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, जसले लगातार चुनिंदा मानसिक भिडियोको प्रदर्शन गर्दछ। वा तपाइँ एक प्रमुख "नि: शुल्क च्याट अब" पट्टी प्रदर्शन गर्ने प्रोफाइलहरूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसोभए तपाईं आफ्नो दिमाग मा कुनै पनि जलाशय प्रश्न सोधेर रोजेका छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईंले जीवन साझेदारलाई भेट्नुभएको छ भेट्नुभयो कि तपाईसँग किन्नको लागि हुनुहुन्छ वा तपाईंले उहाँलाई वा बुट्टा-हो दिनु पर्छ? क्या क्यारियर सफलता र समृद्धि तपाईं कोने को वरिपरि सही पर्खछन्? के तपाईँलाई साँच्चै राम्रो स्थानमा प्रिय हुनुहुन्छ? के तपाईले राती राती सपना देख्नुभएको सपना देखेर आश्चर्यजनक छ कि तपाईसँग लामो बाटो छ यसको बाटोमा छ?
आत्मा मनोविज्ञान तपाईंको लागि र तपाईं कल्पना गर्ने जीवनको लागि सल्लाह र डिप्लोयमेन्ट निजीकृत। मनोविज्ञान प्रोफाइल को जाँच गरेर, तपाईं स्पष्ट रूप देखि पहिचान गर्न सक्छन् कि तपाईं को लागि एक राम्रो फिट हो र अधिक सूचित निर्णय गर्न को लागी। तपाईं सँगै सहयोग गर्न पर्याप्त छ; प्रोफाइलहरू व्यापक र प्रदर्शन उपकरणहरू, विशेषज्ञता, क्षमताहरू, पढाइ शैली, भाषा बोल्ने, मूल्य निर्धारण, प्रशंसापत्रहरू, प्रशंसापत्रहरू पनि छन्। प्लस थपिएको बोनसको रूपमा, तपाईंले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईलाई सोचेको सोच्नु र कतिपय मूल्याङ्कनहरू हेर्ने सन्दर्भमा कतिजना अन्य तयार भएका थिए।
एक अपेक्षाकृत नयाँ साइटको रूपमा, आत्मा अझै यसको विकास मोडमा छ। उदाहरणको लागि, त्यहाँ फिल्टरिंग स्क्रिनहरू छैनन् र यहाँ एक्लै बाह्य छ; ध्यान मनोवैज्ञानिक मा स्पष्ट छ। यसले प्रायः सोधिने प्रश्न खण्ड सम्म पुग्नको लागी एक सानो नेविगेट लिन्छ, जुन पृष्ठको तलमा "मद्दत" अन्तर्गत लुकेको छ। हामी दृढतापूर्वक संकष्ट गर्दछौं कि समुदायले बढि बढ्दो रूपमा थप सुविधाहरू र सजिलो नेभिगेसन थपिनेछ।
तैपनि, त्यहाँ थुप्रै थुप्रै चीजहरू छन् आत्मा सही गर्दैछ। यदि तपाई साईटमा नया हुनुहुन्छ भने तपाई मनोवैज्ञानिकसँग च्याट गर्न सक्नुहुनेछ जो "हाल नि: शुल्क च्याटको लागि उपलब्ध छ" नि: शुल्क १० मिनेट सम्म मार्क गरीएको छ। त्यो नि: शुल्क कुराकानीलाई आश्वासन दिने हो र यो हो; स्पिरिटमका सेवाहरूको फाइदा लिन कुनै लगानी आवश्यक पर्दैन।
आत्मा परिचय परिचय संग छ ... र कसले उनीहरूलाई दोष लगाउन सक्छ? यो सजिलै संग "फ्री" भन्दा राम्रो हुँदैन। "एकपटक तपाईंले आफैलाई सन्तुष्ट पार्नु भएको छ कि तपाईंको मानसिकताले तपाइँका आवश्यकताहरू र अवस्था बुझ्दछ, तपाइँ क्रेडिटहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाइँ निजी दुई-तरिका भिडियो च्याटहरूमा संलग्न हुन सक्नुहुनेछ वा सन्देश वा फोन मार्फत जडान गर्न सक्नुहुन्छ। ... तपाईको छनौट। प्रत्येक मानसिकले आफ्नो आफ्नै मूल्य निर्धारण गर्दछ, 99 एक मिनेटमा सुरू हुन्छ र विशेषज्ञताको क्षमतामा आधारित हुन्छ। तपाइँको पढाईको लम्बाइ निर्धारण गर्न यो माथि छ; त्यो तरिका तपाई जान्नुहुनेछ-अगाडि तपाईको पढाइ बिना कुनै आश्चर्य बिना खर्च हुनेछ।
तपाईं Eos.tv स्वामित्व स्वामित्व एक कम्पनी बाट आशा गर्न सक्छ, आत्मा सन्तुष्टि पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ। यदि तपाइँ आफ्नो पढाइको साथ पूर्णतया आनन्दित हुनुहुन्न भने, तपाइँलाई उनीहरूको समुदायमा कुनै पनि मानसिकताबाट अर्को पढ्न पाउनुहुनेछ।
तलको रेखा: आत्मा राम्रो मूल्य को प्रतिनिधित्व गर्दछ। सम्भवतः कुनै पनि अन्य मनोवैज्ञानिक सञ्जालले आज देशको बहुमतमा उत्कृष्ट मानसिक दिमागबाट बहुभाषी समर्थन प्रदान गर्दछ। जब तपाइँ फ्री नो-रिच परिचय परिच्यापकमा थप गर्नुहुन्छ, यी भित्री मनोविज्ञान जाँच गरी हराउनको लागि केहि छैन। अनि सम्भवतः एक नयाँ नयाँ सपना प्राप्त गर्न।